Professor Samatar ” Farmaajo suurtagal uma ahan inuu gorgortan ka galo kiiska yaalo Maxkamadda” – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Professor Samatar ” Farmaajo suurtagal uma ahan inuu gorgortan ka galo kiiska...
Professor Samatar ” Farmaajo suurtagal uma ahan inuu gorgortan ka galo kiiska yaalo Maxkamadda”
Beegsonews– Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo cilmiga Juqraafiga ka dhiga Jaamacadda Minnesota ee dalka ee Mareykanka ayaa BBC-da u sheegay inaanay u muuqan in Soomaaliya ay wax gorgortan ah ka geli doonto arinta badda.
“Anigu waxaan isleeyahay arinta ceynkaas ah suuragal u noqon mayso madaxweynaha Soomaaliya, waayo dadka Soomaaliyeed oo dhan waxay ogyihiin xaqoodu meesha uu yaallo, gorgortanna kama geli karaan arinta ceynkaas ah,” ayuu yiri professorka.
Kenya ayaa la rumaysan yahay inay doonayso in arinta muranka xuduud badeedka lagu xalliyo qaab hoose, halka Soomaaliyana ay ku adkeysanayso in laga warsugo go’aanka Maxkamadda Caddaaladda Adduunka ee loo gudbiyay kiiskan.
Professor Cabdi Ismaaciil Samatar ayaa sheegay in haddii ay dhacdo in Soomaaliya ay gorgortan ka gasho kiiska yaalla maxkamadda, ay taasi noqon doonto “shil weyn oo siyaasadeed oo soo gaari doona wadanka Soomaaliya.”
Weli Soomaaliya iyo Kenya ayaan dib isugu celin safiiraddii u kala fadhiyay caasimadahooda, waxaana la tilmaamayaa in arintaasi ay ku xiran tahay horumarka laga gaaro kulanka Arbaca dhici doona.
Xiisadda diblomaasiyadeed ee u dhaxeysa labada ayaa meel xun gaartay, kadib markii dowladda Kenya ay Soomaaliya ku eedeesay in London ay ku “xaraashtay” ceelal shidaal oo ku yaal xuduud badeedka lagu mursan yahay.
Soomaaliya ayaa sheegtay in shirkii London ka dhacay 7-dii Febraayo lagu soo bandhigay xog sahmin oo keliya isla markaana aanay xaraashin ceelal shidaal lagu tuhunsan yahay.
Previous articleHay’adda La Dagaalanka HIV/AIDS-Ka Ee Puntland (PAC) Oo Sheegtay In Rag Kufsi Geystay Ay Qabaan Cudurka HIV /AIDS
Next articleGabar Soomaali ah oo afduubatay diyaarad oo dalbatay in dib loogu soo celiyo Somalia
Raysal wasaaraha Itoobiya Abey Ahmed 𝗦𝗵𝗮𝗮𝗰𝗶𝗻 𝗶𝘆𝗼 𝗵𝗮𝗻𝗷𝗮𝗯𝗮𝗮𝗱 𝗱𝗮𝗴𝗮𝗮𝗹
(Akhriso) Galmudug oo amar ku soo rogtay Dadka Shacabka ee ku...